मध्यम मूल्यमा हस्तक्षेप- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
मध्यम मूल्यमा हस्तक्षेप
वैशाख १३, २०७६ हेलो शुक्रबार
सामसुङको ए थर्टी र ए फिप्टीले नेपाली बजारमा हुवावेको वाई नाइन, साओमीको नोट एट लाइटजस्ता फोनसँग मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ  ।
हरेक कम्पनीका लागि सफलताको मानक मध्यम मूल्यका स्मार्टफोनहरू हुन् किनकि अधिकांश प्रयोगकर्ताले मध्यम मूल्यकै फोन खोज्छन् । नेपाली मोबाइल बजारमा मध्यम मूल्यका फोन भनेर २५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्मका फोनलाई बढी चिनिन्छ । यही मूल्यमा जसले राम्रो फोन दिन सक्छ, उसकै फोन बिक्छ ।
सामसुङले मध्यम मूल्यको मोबाइल बजारमा आफ्नो पकड राख्न नेपालमा दुई मोडल भित्र्याएको छ– ए थर्टी र ए फिप्टी । दुवै फोनको विशेषता मध्यम मूल्यमा हाई एन्ड फोनका अनुभूति हो । दुवै फोनले नेपाली बजारमा सामसुङको उपस्थिति बलियो बनाउनेछ । ६.४ इन्चको स्क्रिन भएका दुवै स्मार्टफोन एक हातमा चलाउँदा पनि सहज छ । ए थर्टीमा १६ र ५ मेगापिक्सेलका दुई क्यामेरा छन् जुन यो मूल्यमा प्राप्त हुने अन्य स्मार्टफोनसँग तुलना गर्दा कमजोर देखिन्नन् । ए फिप्टीमा भने २५, ८ र ५ पिक्सेलका तीन क्यामेरा छन् जुन अहिले चल्तीमा रहेका स्मार्टफोनको ट्रेन्ड बनेको छ । क्यामेराको हिसाबले हेर्दा अलि बढी मूल्य तिर्दा प्रयोगकर्ताले ए फिप्टीबाट बढी अनुभव गर्न पाउनेछन् । तर, थोरै मूल्य तिर्दा पनि ए थर्टीले निराश बनाउने छैन । ए थर्टीमा १६ मेगापिक्सेल र ए फिप्टीमा २५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा राखिएको छ ।
एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करण एन्ड्रोइड पाईमा उपलब्ध हुने दुवै फोनमा दुई–दुई सिम लाग्छन् र दुवैमा भ्वाइस ओभर एलटीईको सुविधा हुनेछ । भ्वाइस ओभर एलटीई सेवाको अनुभूति गर्न नेपाली प्रयोगकर्ताले अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ किनकि अहिले कुनै पनि टेलिकम सेवा प्रदायकले यो सेवा सुरु गरिसकेका छैनन् ।आकार, प्रकार र उचाइसहित धेरै हिसाबले ए थर्टी र ए फिप्टी उस्तै लाग्छन् । ए थर्टीमा १.८ र ए फिप्टीमा २.३ गिगाहर्जको अक्टाकोर प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । प्रयोगका हिसाबले दुई फोनको गतिमा यसले पनि केही फरक पार्नेछ । दुवै फोनमा ४ जीबीको र्‍याम प्रयोग गरिएको छ । दुवैमा सामसुङको एक्सिनोस चिपसेट रहेको छ ।
ए थर्टीको पछाडि फिंगर प्रिन्ट सेन्सर राखिएको छ । ए फिप्टीको अनस्क्रिन फिंगर प्रिन्ट सेन्सर छ । दुवै फोनमा ४ हजार एमएएचको ब्याट्रीको छ जुन प्रयोगकर्ताका लागि दिनभरिका लागि काम गर्छ । दुवैमा फास्ट चार्जिङको सुविधा छ । दुवै फोनले नेपाली बजारमा हुवावेको वाई नाइन, साओमीको नोट एट लाइटजस्ता फोनसँग मूल्यका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
सस्तो फोनमा विकल्प
चिनियाँ कम्पनी साओमीले गुगलको गो प्रोजेक्टसँगको सहकार्यमा तयार पारेको रेडमी गो फोन पनि नेपालमा उपलब्ध छ । मूल्यका हिसाबले सस्तो यो फोन सामान्य स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताका लागि निकै राम्रो विकल्प हो । स्मार्टफोनको सबै आधारभूत फिचर रहेको यसमा मूल्य र क्षमताका हिसाबले गुनासो गर्ने ठाउँ रहन्न ।आधारभूत स्मार्टफोनमा पनि आफ्ना सबै एप र प्रोडक्टहरू अटाउन् भनेर गुगलले गो प्रोजेक्ट सुरु गरेको हो । यसमा गुगलका सबै एपहरू उपलब्ध गराउन छुट्टै डिजाइन तयार पारिएको हुन्छ । कम डाटा खर्च हुने र राम्रो क्षमता हुने कम मूल्यका स्मार्टफोनलाई लक्षित गरी यो सुरु भएको हो । यही प्रोजेक्टअन्तर्गत निर्माण भएको रेडमी गोमा ५ इन्चको स्क्रिन छ र ८ जीबीको स्टोरेज छ । यसलाई अरू मेमोरी चिप राखेर बढाउन पनि सकिन्छ । यसमा १ जीबीको र्‍याम र ३ हजार एमएचको ब्याट्री राखिएको छ । आधारभूत फिचर मात्रै भएकाले यसको ब्याट्री एक दिनभन्दा बढी प्रयोग गर्न पनि उपयोगी छ । एन्ड्रोइड ओरियो अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिएको फोनले दुई सिम सपोर्ट गर्छ । यसले फोरजीसहित थ्रीजी र टुजी नेटवर्क सपोर्ट गर्न सक्छ । क्वालकम स्न्यापड्र्यागन ४२५ चिपसेट प्रयोग भएको फोनले पर्फमेन्सको हिसाबले पनि गुनासो गर्न दिन्न । यसमा ८ मेगापिक्सेलको रेअर र ५ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामेरा छ ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७६ १२:३८
वैशाख ६, २०७६ हेलो शुक्रबार
काठमाडौँ — लन्डनस्थित इक्वेडर दूतावासमा ६ वर्षयता रहेका अस्ट्रेलियाली नागरिक जुलियन असान्ज फेरि चर्चामा छन्  । इक्वेडरले थप शरण दिन अस्वीकार गरेसँगै लन्डन प्रहरीले उनलाई गत साता पक्राउ गर्‍यो  ।
उनलाई अमेरिकी र स्वीडिस प्रहरीले पनि पक्राउ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
अमेरिकासहित धेरै देशका गोप्य कागजपत्र सार्वजनिक गर्दै आएको विकिलिक्सका संस्थापक असान्जले इक्वेडरको दूतावासमा शरण लिने बेलामै आफू उक्त संस्थासँग संलग्न नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनी अझैं विकिलिक्सकै गतिविधिमा लागेको र दूतावासमा महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू हात पार्न खोजेको आरोप लागेको छ । उनी सन् २०१२ देखि लन्डनस्थित इक्वेडरको दूतावासमा बस्दै आएका थिए । लन्डनको अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अमेरिका पठाउन आदेश दिएपछि उनी दूतावासमा छिरेका थिए ।
आखिर असान्ज किन यति धेरै चर्चामा र खोजीको सूचीमा छन् ? कारण खोज्न सन् २०१० तिर फर्किनुपर्छ । विकिलिक्सको स्थापना २००६ मा भए पनि यसले व्यापक चर्चा २०१० मा आएर पायो । यसले अमेरिकी सेनाले इराक र अफगानिस्तानमा सर्वसाधारण मान्छे कसरी मारेको थियो भन्ने गोप्य दस्ताबेज र भिडियोसमेत सार्वनिक गरिदियो । त्यसपछि वर्षभरि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले संसारभर आफ्ना कर्मचारीसँग गरेको गोप्य इमेलहरू पनि सार्वजनिक भइरहे ।
विकिलिक्सकै कारण अमेरिकी सरकारले संसारभर आलोचना खेप्नुपर्‍यो । सबैभन्दा आलोचित जानकारी इराकमा अमेरिकी सेनाले सर्वसाधारणको हत्या गर्दाको थियो । उक्त दृश्यमा हेलिकप्टरमा रहेका सेनाको टोलीले सर्वसाधारणलाई तोकेर गोली हान्ने सल्लाह गर्छन् । एक अधिकृतले अर्को जवानलाई भनेका छन्, तिनीहरू सबैलाई उडाइदेऊ । नभन्दै गोली चल्छ र सडकमा हिंडिरहेका सर्वसाधारण ढल्छन् ।
केहीबेरमा घाइते लिन आइपुगेको भ्यानमाथि पनि अमेरिकी सेनाले गोली चलाउँछन् र केहीको मृत्यु हुन्छ । अति अमानवीय र क्रूर यो तथ्य सार्वजनिक भएपछि संसारभर नै अमेरिकी सरकार र सेना आलोचित बनेको थियो । यसबाहेक सेलिब्रेटी, अमेरिकी र बेलायती दलहरूका गोप्य दस्तावेजहरू पनि सार्वजनिक गरेर विकिलिक्सले आफ्नो चर्चा त कमायो नै यसले संसारभर हुने तुच्छ कामको नालीबेली पनि बाहिर निकाल्यो ।
सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको क्रममा हिलारी क्लिन्टनका प्रचार प्रमुखले क्लिन्टनकी प्रतिस्पर्धी बर्नी सान्डर्सलाई मूर्ख भनी सम्बोधन गरेको इमेल विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको थियो । सान्डर्सले उठाएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर उनलाई मूर्ख भनिएको थियो । त्यसअघि सन् २००८ मा विकिलिक्सले ब्रिटिस नेसनल पार्टीको सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणसहित उक्त पार्टीले तयार पार्दै गरेको गोप्य घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिदियो । उक्त घोषणापत्रमा मुस्लिम देशका नागरिकलाई बेलायत आउन प्रतिबन्ध लगाउने र केही नागरिकलाई
पुरानै देश फर्कन प्रोत्साहित गर्ने गरी नीति लिने लेखिएको थियो । त्यसले नेसनल पार्टीविरुद्ध आक्रोश बढायो ।
सन् २०१५ मा सोनी इन्टरटेनमेन्ट ह्याक भएको थियो । दक्षिण कोरियाली ह्याकरले गरेको भनी प्रचारित उक्त घटनासँग सम्बन्धित करिब २ लाख इमेलहरू विकिलिक्सले प्रकाशित गरिदियो । उक्त कागजपत्रमा फिल्म निर्माताहरूले महिला कलाकारहरूबारे के कुरा गर्छन् भन्ने विवरणहरू थिए । महिला कलाकारले पुरुष कलाकारको तुलनामा निकै कम पारिश्रमिक पाउने गरेको, आफ्नो फिल्म खेल्न नमान्दा कलाकारहरूलाई निर्माताले तुच्छ शब्दले सम्बोधन गर्ने गरेको जस्ता तथ्य सार्वजनिक भए ।
विकिलिक्सले धेरै गोप्य दस्ताबेजहरू सार्वजनिक
गरेको भए पनि यसलाई चर्चित बनाउन अमेरिकी गुप्तचर निकायकी विश्लेषक चेल्नी म्यानिकङको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । सन् २०१० मा विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको इराक र अफगानिस्तान युद्धका दस्ताबेज र भिडियोहरू उनैले सार्वजनिक गर्न सघाएकी हुन् । इराक युद्धमा मात्रै ६६ हजार सर्वसाधारण मारिएका र सयौंलाई जेलमा यातना दिइएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरेकी उनी अहिले जेलमै छिन् ।
प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ १२:१९
रिभेन्ज पोर्नको पीडा
निस्क्रिय एकाउन्ट बन्द गर्ने योजना रद्द
फेसबुकको तस्बिर सीधै फोटोजमा
निर्माण सुरक्षामा हेलचेक्र्याइँ
राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी मंसिर ३०, २०७६
नेपालमा भौतिक पूर्वाधारमा खर्च वर्षेनि बढेसँंगै अग्ला, ठूला र जटिल प्रकृतिका निर्माणको क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ । योसँगै निर्माण सुरक्षामा भने अपेक्षित सुधार आउन सकेको...
नेतृत्व सङ्कटका जोखिम
गेजा शर्मा वाग्ले मंसिर ३०, २०७६
२०४६ मा बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि राजनीतिक दल र नेतृत्वबारे नेपाली राजनीतिमा निरन्तर आलोचनात्मक बहस हुँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्ने...
साधना प्रतीक्षा मंसिर ३०, २०७६
पुरुष सांसदबाट संसदभित्रै हामीमाथि यौनहिंसा भएको छ, तर इज्जतको डरले सहन बाध्य छौं ।’ यस्तो बाध्यात्मक अभिव्यक्ति हो गण्डकी प्रदेशसभाका महिला सांसदको । जनप्रतिनिधिका रूपमा नीतिनिर्माणको तहसम्म...
किनारा लाग्दै भूमण्डलीकरणको लहर
अच्युत वाग्ले मंसिर ३०, २०७६
गत साता सम्पन्न बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन नेतृत्वको कन्जर्भेटिभ पार्टीले तीन दशकयताकै प्रचण्ड बहुमतका साथ विजय हासिल गरेको छ । सन् १९८७ मा सोही...
जवाफ देऊ, जिम्मेवार बन
सम्पादकीय मंसिर ३०, २०७६
किन कुनै तथ्य बारम्बार दोहोर्‍याइन्छ ? या त जसलाई सुनाउन खोजिएको हो उसले नसुन्दा । नभए सुनेर पनि सुनेको नसुन्यै गर्दा । सडक दुर्घटनाको सवाल एउटा यस्तै विडम्बना...